Apple Mountain Shumba Bhizinesi Zvimiro
Mugovera, Nyamavhuvhu 25, 2012 Svondo, Nyamavhuvhu 26, 2012 Douglas Karr
Ini ndanga ndiri mukomana anofarira kubva shamwari yangu Bill paakanditengera Apple TV. Usati wazviziva iwe, ini ndaive neimba yakazara maMac uye bhizinesi rangu rave maMac ese. Kuuya kubva kuPC yepasi, kwave kune mamwe matambudziko. Mienzaniso mishoma kubva kumusoro kwemusoro wangu… hapana macro muHofisi, hapana Microsoft Access. Icho chinyorwa chidiki diki, hazvo. Izvo zvakanakira Mac iri kutendeuka kuve yakakura kwazvo kupfuura zvakaipira kuve Mac mune PC yenyika.
Iine yazvino Hardware uye software, Apple yanga ichirovera kumba zvimwe zvinoshamisa zvinhu zvinonakidza kune chero bhizinesi.
Ikokutanga AirPlay. Ndiine Apple TV ye $ 99 uye chero yakasvibira TV, hofisi yako ikozvino yave nenzvimbo yekunyatsoburitsa zviri pane yako laptop. Neshanduro yazvino yeOSX, Mountain Lion inowedzera bhatani reAirPlay pabhawa remenu. Dzvanya uye skrini yako inoratidzwa. Iwe unogona kunyange kutamba vhidhiyo uye kurira!
AirDrop inotevera… chikamu cheMakomo Shumba Yakavakwa-In Kugovana. Mutengi wedu, Tinderbox, yakauya nekugadzirisa mamwe mafaera. Panzvimbo pekutumira tsamba kana kuisa mune yakagovaniswa gore dhairekodhi… AirDrop yakangomubvumidza iye kuti atumire iyo faira kunanga kuMac yangu. AirDrop inonyora ese maMac munzvimbo yako uye inokutendera iwe kutumira uye kugamuchira mafaera (nemvumo). Chinhu chinotyisa!
Time Machine ndiyo yakapusa backup system. Isa Nguva Capsule pane yako network kana kungogovana dhiraivha kumwe kunhu… uye une nzvimbo yekuchengetedza yeTime Machine iyo isingatsigire Mac yako.
Apple yagara iine maturusi makuru ekukubatsira kutama kubva kune imwe Mac uchienda kune inotevera, asi Kutama Mubatsiri yakapusa uye inoshamisa! Ini ndichangobva kutenga MacBook Pro nyowani uye ndaida kuendesa maapp angu uye mafaera pamusoro pawo. Bhoot kumusoro neOption bhatani rakadzvanywa uye yakapusa wizard inokubvunza iwe kana iwe uchida kudzorera kubva kuTime Machine, gadzirisazve Mountain Lion nyowani, kana kuteedzera mafaera ako nemaapplication kubva kune imwe Mac. Mukati meawa ndakanga ndasimuka uye ndichimhanya!
Ramba uchifunga kuti hapana yeaya maratidziro maficha anotoda network mutungamiriri uye kuomesa kumisikidza. Sezvo nezvakawanda zvese zvinogadzirwa neApple, zvinongoshanda.
Aug 27, 2012 na4: 55 PM
Uye kana iwe "waenda Mac", haugone kudzokera kumashure! 😉
Patrick Chen paMarketo
Aug 29, 2012 pa 11: 34 AM
Excel… chikonzero chimwe chete chero nyanzvi yekushambadzira inofanirwa kunge ichishandisa PC, kwete Mac.
Sep 13, 2012 na4: 59 PM
Excel inoita kunge inomhanya zvishoma pane akura maMac, asi iri kupisa pane yangu nyowani MacBook Pro. Izvo zvinokanganisa ndezvekuti VBA neMacros hazvimhanye paMac (kunze kwekunge uchimhanya muWindows… izvo zvinogoneka, asi zvinokunda chinangwa chekuve neMac!).
Sep 2, 2012 pa 5: 14 AM
Excel inomhanya paMac uye ndizvo zvinoita maNhamba (Mac vhezheni yepamusoro). WIth nhamba iwe unogona kutumira kunze uye kugadzirisa kupfuura maspredishiti uye woachengeta mune akanakisa fomati. Nyore!
Sep 2, 2012 na5: 19 PM
Chokwadi @ twitter-15194414: disqus, asi zvinosuwisa kuti vhezheni yeExcel paMac haisanganisi VBA (Visual Basic yeApplications) kana Macros… iro igap rakakura mukushanda!
Sep 13, 2012 pa 5: 01 AM
Yemazuva ano, zvine mwero inozivikanwa komputa inoshanda sisitimu ine Excel-inoenderana spreadsheet chirongwa chiripo. Nyika inoshamisika inoita mutambo wemazuva matatu mukupemberera.
Mune dzimwe nhau, denga rebhuruu, mvura yakanyorova.
Ini ndaive neExcel mutoro / edit / chengetedza inoenderana spreadsheet pane yangu 90s-spec PALM PILOT uye yepakati-noughties Symbian-based PHONE nekuda kwekunzwira tsitsi.
Sep 13, 2012 pa 4: 56 AM
Ehhh… ngatitii handina kugutsikana zvakanyanya pano.
Airdrop inonzwika gehena yakawanda kunge iyo faira yekugovana maficha akavakirwa muMicrosoft Windows kweanopfuura makore makumi maviri ikozvino, uye ayo atinoshandisa nguva dzose muWindows XP / 7 hofisi yedu. Ndiri kunetseka kuzviona seUSP yeMac. Uye kunyangwe dai izvo zvainge zvisipo, zvingave zviri nyore kuita chinhu chimwe chete kana ne $ 10 bluetooth dongle yakavharirwa muchiteshi che USB padesktop, uye iyo yakavakirwa mukati (uye isina kumisikidzwa) BT maficha pane chero chero PC laptop (zvirokwazvo, ndechimwe chinhu chandakashandisa zvakanyanya kutumira mafaera uye nekubva kune foni yaive neBluetooth asi isina kusimba USB yekubatanidza, iine malaptop uye madhesiki ane dongle-akashongedzerwa)… kana kunyangwe zvirinyore, uchiroverera neka- $ 10 USB memory stick kana SD kadhi.
Airplay… OK, kwete zvakaipa, asi iwe uchiri kuda iyo inomiririra kuti ive Apple TV yakagadzirirwa uye yakabatana. Zvichida hazvina kunyanya kuoma kuita zvakafanana nechero yekare junk PC / laptop yakabatana neiyo HDTV's VGA yekuisa pamwe neRemote Desktop Kugovana ficha (zvakare yakavakirwa muWindows kubvira kanenge 2K, kana isiri 9x)… uye munzvimbo yehofisi ndinogona ' t tione pane akawanda HDTVs nezve izvo zvisina kana hafu yakadzikama bhizinesi PC (kana zvirokwazvo yakatsaurwa Mac) yakabatana kumusoro, kana yakadzamidzirwa Windows muchina wakavakirwa-mukati (mune emadhijitari emasaini mabhodhi). Iko kune zvakare isina waya ekuratidzira anopenya zvishandiso anowanikwa maPC - kutaura zvazviri, chero chishandiso chinoburitsa VGA, RGB kana YCbCr hi-def chinhu chiratidzo (uye mune dzimwe nguva HDMI / DVI, kana inoumbwa) zvisinei nerudzi, inoshanda system, madhiraivha kana software - kwete yakawanda mari. Mazuva ano Smart TVs anogona kuita chimwe chinhu munzira idzi kuburikidza neethernet (uye nekudaro wifi) futi, asi panguva ino handisi kuzoisa mari pairi…
Nguva Capsule… Ini handidi kuchera mukati mayo zvakanyanya, asi zvinogara zvichinzwika zvakanyanya kwandiri. Ini ndatenga zvakachipa zvekunze zvakaoma dhisiki zvisati zvauya neakafanana chaizvo auto-backup software, uye ini ndinobheja kana ndikatenga generic NAS mudziyo inogona kuita chaizvo zvakafanana. Mazuva ano network dzakashandurwa dze windows dzinogona kusetwa ku auto dura dzekare vhezheni dzemafaira pane backup server dhiraivha yeavo "oops" nguva zvakangofanana sezvavanogona ne TC (muchokwadi… unogona here kuburitsa mafaera rimwe chete maari? Ini ndaive neruzivo rwakananga waifanirwa kudzoreredza iyo yose komputa…) - asi zvakare, ndakashandisa nzvimbo iyoyo pane yangu yega nzvimbo yekushandira muchina mushure mekukanganisa kwekushaya hanya, uye yaive yakanyatsoita musono… tinya kurudyi pafolda iri kutaurwa, enda kune "yapfuura shanduro" tab, uye uwane poke kuburikidza neiyo ine iyo yakashaikwa faira yakawanikwa… wobva wateedzera iyo faira faira mune yazvino vhezheni yefaira.
Migration Assistant - Horaiti, une poindi ipapo. Ndingafarire izvo zvemakomputa angu (sezvazviri, hazvisi izvo zvakanyanya kurwadziwa kwekubatanidza dhiraivha yekunze, kuteedzera iyo diki diki yemagwaro uye mamwe mafaera edatha anogara pane yemukati dhisiki pamusoro kune nyowani muchina (kana kunyangwe wongovaisa padiki diki maDVD), wobva waisazve mapurogiramu mashoma andiri kushandisa kunze kwenhamba huru yakaiswa pasi makore uye zvishoma nezvishoma yakanganikwa nezvayo). Asi izvo zvichave zvinonyanya kukosha kumushandisi wepamusha kana mumwe munhu muhofisi diki uye isina kurongeka pane chero mhando bhizinesi rakadzikama riine netiweki nemaseva, uko chero sysadmin yakakosha munyu wavo ichange ichishanda neyakaenzana mashandiro ekushandisa dhiraivha mifananidzo zvakadaro.
Icho chaicho chiri bhenefiti iyo idzi dzinobvisa netiweki maneja uye chero rudzi rwehurongwa hwehurongwa kana sangano kune yako hofisi network? Mhirizhonga yerudzi irworwo inotungamira mukutsvedza, kushomeka kwekugona kwekupora, kusagadzikana uye kusagadzikana kwekushandisa, pasina chaicho chaunopa mukugadzira.
Sep 13, 2012 na5: 01 PM
Airdrop yakatosiyana pane dhairekodhi / faira kugovana paPC. Izvi hazvidiwe netiweki… ingori imwe Mac mukati meiyo waya isina waya. Zvakanaka chaizvo! Chero nguva yandakaita filesharing nePC, ini ndaifanirwa kutora mushandisi kupinda pane yemubatanidzwa network uye ndokuwedzera kuboka ravo ndisati ndagovana chero chinhu.
Mar 13, 2013 pa 12: 29 AM
yako kushaya poindi chiratidzo. Ivo vanongoshanda chete, kwete setups, control panel (kunze kwemvumo). Ini ndaive mukomana wepc kwemakore makumi maviri uye mushure mekuve sys admin kubasa uyezve kuuya kumba kuzove sys admin weHW kumba, ndakaneta. Akashandisa mari pama macs uye haana kumbocheuka. Hapasisina mabhuruu, mapingi, vachena kana vatema. Macs anongoshanda w / o chero hunyanzvi hwe admin hunodiwa. Kubasa takawana mukana wekuhodha Mac kana PC. Uye ini ndakaenda nemac, nekuti ini ndinogona kugara ndichimhanya windows mukati meVMware. PC dziri kuenda nekuti iyo HW jsut inongoda kushanda w / o uine BS mu CS.
Sep 24, 2012 pa 3: 58 AM
Zvakanaka, windows inomhanya paMac inomhanya nekukasira, smother uye inoita zvaunoda zvirinani pane PC. Saka uine izvozvo mupfungwa uye izvo Mac inogona kuita zvirinani pane PC, wadii kuva nenyika mbiri pamushini uri nani. Mukupedzisira iwe unowana iwe uchishandisa iyo PC chikamu zvishoma nezvishoma.
Apr 25, 2013 pa 12: 17 AM
Airplay hapana hombe dhiri kana. Yangu yemakore mashanu PC piritsi inogona kutenderera ese maMedia centre mafaera kune yangu makore mana ekuberekwa Sony Network Player. Yawn.
May 12, 2013 pa 12: 22 AM
May 23, 2013 pa 1: 37 AM
Izvi zvinoita kunge mumwe 'fan mukomana' akakura kuna Apple. Asi pane zvinhu zvishoma zvisirizvo, semuenzaniso, Mac ipfupi yeMacintosh, asi hapachina Macintosh komputa zvakare. "Mac" iPC, inofanana hardware mune imwe kesi inopenya, uye inodhura kanokwana kana. Ini ndinofunga mutsauko waURI KUEDZA kuratidza ndewekuti MacOS (kureva, iyo Inoshanda Sisitimu) iri nani pane Windows yekushandisa bhizinesi, zvakadaro watadza kuratidza chero zvikonzero chaizvo nei MacOS iri nani kune mushandisi webhizinesi.
Heino chikonzero nei:
1. AirPlay inoda kuti UTENGESE imwe Hardware, uye makambani mazhinji haana Apple setup, zvinoreva kuti kana iwe ukawana AirBook kana chimwe chinhu ipapo unozotadza kugovana zvauri kuita pane chero hombe-skrini kana unofamba uchibva paTV yako yakatsaurirwa. Mazhinji maprojekita anokundikana kuratidza yako skrini mushe uye anodonhedza kune 1024 × 768 skrini (zvakanyanya, kazhinji 800 × 600 zvakadaro), izvi zvinopa mashoma kuona chiitiko, uye zvinowanzoitika kune chero munhu achigovana desktop yavo nevamwe - ini handina unowana chero bhizinesi riine Apple TV parizvino.
Dai iwe waizogovera hwindo rako re desktop, iwo mamwe maprojekita anokurega iwe ushandise 1280, 1440, 1600 kana 1920 pasina dambudziko - saka nei iyo imwecheteyo hardware ichitadza kuita izvi, nekuda kwekuti urikushandisa MacOS? Ini ndinofunga mubvunzo unozvipindura wega.
2. AirDrop yakangofanana neiyo auto-yekuona mukati meWindows iyo yanga iriko kubvira windows 2000. Chero muchina uri padandemutande uri kugovana chero chinhu pachena uchabuda munzvimbo yako ye "My Network Places", haufanire kuita chero chinhu kuti uwane izvi, zvinongoshanda! Kana iwe uchida kutumira chimwe chinhu kune mumwe munhu, ingo dhonza uye udonhedze mufaira iro, asi unogona zvakare kutarisa mafaera avo panguva imwe chete.
Kana ivo vakavharira kunze mvumo (vazhinji maMirairi vanozodzivisa izvi mune yavo yepasi mufananidzo), ipapo ivo vanogona kungokupa iwe kunyora mvumo kune yavo Ruzhinji Zvinyorwa dhairekita mumasekondi mashoma.
3. Nguva Machine inonzwika senge kubvarura kweiyo refu-inomhanya windows otomatiki backup (kubvira kuhwina 2000). Asi iyo windows imwe inongochengeta chete mafaera ehurongwa, kana iwe uchida kusevha yako wega mafaera, iwe unowanzo kuve nenzira yekuita izvi ne windows server software iyo iyo mushandisi isingatombodi kuziva nezvayo - zvinongoitika chete .
Kana iwe uchida kuita yega data backup, zvakadaro, zviri nyore kwazvo kuzviita mumawindows sezvazviri kuzviita paMacOS, ingoisa dhiraivha kumuchina wako, kana NAS kunetiweki yako, uye ivo vachauya iyo software inokodzera kuti ma backups ako amhanye… Kune zvakare mazana ezvakawanda nzira dzeCloud Backup kunze uko idzo dzakachipa uye dziri nyore kushandisa.
4. Rubatsiro rwekufambisa mune bhizinesi kutambisa nguva, nekuti yako "Admin" ichangoisa chifananidzo pamushini, uye mafaera ako ega / ane chekuita nebasa achange atove akatsigirwa kumwe kunhu… Uye achave achiwanikwa kune wako mushandisi zvisinei nemuchina upi waunopinda mauri. Windows yanga ichishandisa vashandisi vanofamba-famba kubvira windows 95, iyo inozvitsigira yega data kunetiweki yako. Maturusi akadai sebhegi anoshandiswa kukubvumidza kuti uchengete mafaera musynch pakati pemainternet nepamhepo modhi zvakare, uye izvo zvaiwanikwa muWindows 95!
May 23, 2013 pa 10: 20 AM
Zvinoita kunge “asiri-fan mukomana” iwe usati washandisa maficha aya, @ facebook-100000630323259: disqus. 🙂
1. Ndati inoda $ 99, asi mataura pfungwa yangu. Nei bhizinesi raigona kushandisa zviuru kuprojekita pane kungoisa yakanaka HDTV uye AppleTV? Ndosaka ndichikurudzira.
2. Kwete, ndinotya kuti hapana kana padhuze. Iko hakuna kudiwa kwekuseta mvumo, kuve pane imwechete Windows network, nezvimwewo AirDrop inobvumidza chero maMac mukati mepedyo uye akabatana kune imwecheteyo waya yekugovana mafaera.
3. Zvakare, kana iwe ukanyatso mhanyisa software, iwe waizoona mutsauko.
4. Ini ndakashandira gumi nemaviri emabhizinesi uye vaviri chete ndivo vakafananidzwa zvakafanira uye vakagovana network mafolda aunotaura nezvazvo. Zvekare, izvi zvinoita kuti Mac yangu nyowani ive EXACT kopi, nepo Hardware yakagadziridzwa pasi payo.
Handisi kutaura semukomana asina ruzivo mune zvese izvi. Ndine monster Windows system pamba ine XBox 360 yevaraidzo. Icho chiitiko cheWindows hachina kufanana. Mac uye OSX maficha anongoshanda zvirinani, nekukurumidza, uye nyore kupfuura Windows. Ini ndaive mushandisi weWindows kweanopfuura makore gumi. Ndinotya kuti handimbodzokeri shure. Shamwari dzangu dzaigara dzichinditsoropodza nezve kuva "fan mukomana" vakawana zvakafanana.